संकेत जान्न को लागी यदि म एन्ड्रोइड मोबाइल परिवर्तन गर्न को लागी छ Androidsis
कसरी जान्ने कि एन्ड्रोइड फोनहरू स्विच गर्ने समय हो
ईडर फेरेनो | | ट्यूटोरियलहरू
मलाई कसरी थाहा छ जब मेरो फोन परिवर्तन गर्ने? यो एक प्रश्न हो कि पक्कै एक भन्दा धेरै अवसर मा आउनुभएको छ। सौभाग्य देखि, जवाफ सामान्यतया हाम्रो आफ्नै एन्ड्रोइड फोन मा छ। समय को बहाव संगै, फोनले हामीलाई केहि सुराग दिईरहेको छ जो स्पष्ट लक्षण हो कि समय स्मार्टफोन परिवर्तन गर्न को लागी आएको छ। र उनीहरु धेरै सोच्ने भन्दा सजीलो पहिचान गर्न को लागी छन्।
तसर्थ, तल हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं यी संकेतहरु जसले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि पल आउँदैछ अर्को एन्ड्रोइड फोन खोज्दै। यसको मतलब के हो फेरि परामर्श शुरू गर्न को लागी बजार मा के छ वा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरु.
1 ठाउँको अभाव
2 ढिलो काम गर्दछ
3 ब्याट्री जीवन
4 Android को पुरानो संस्करण
5 पुरानो निर्दिष्टीकरण
एक धेरै लगातार समस्या हामी सामना जब हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन एक समय को लागी वरपर भएको छ। तपाइँ ध्यान दिनुहुनेछ कि तपाइँ जे गर्नुहुन्छ, सधैं तपाइँ फोन मा ठाउँ को बाहिर चलिरहेको अन्त। यदि तपाइँ बिभिन्न प्रयोग गर्नुहुन्छ ठाउँ खाली गर्ने तरिका, फोन एक छोटो समय पछि फेरि बिना यो हुनेछ।
यो त्यस्तै हो यो धेरै कारणहरु को लागी हुन सक्छ। आवेदन धेरै भारी हुन सक्छ, विशेष गरी अपडेट पछि। यो पनि दिमाग मा वहन गर्नु पर्छ कि त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरु जो कम भण्डारण ठाउँ संग उपकरणहरु छन्, लगभग 8 वा 16 जीबी को केहि मामिलाहरुमा छन्। यो धेरै मेमोरी को संभावनाहरु लाई सीमित गर्दछ।
ढिलो काम गर्दछ
यदि हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोन लाई मद्दत गर्न को लागी सुझावहरु को पालन गर्दछौं स्थिर रहनुहोस् सबै समय मा, एक समय आउँछ जब यो ढिलो चल्छ। यो केहि छ कि पक्कै तपाइँ अवसर मा भयो। सञ्चालनमा स्पष्ट मन्दी छ यन्त्रको। तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ जब बिभिन्न प्रक्रियाहरु को लागी, र एक भन्दा बढी अवसर मा तपाइँ पुरा तरिकाले पकडिएको हुन सक्छ।
यो स्पष्ट छ यदि पनी जब हामी दैनिक कार्यहरु गर्छौं हामीले देख्यौं कि फोन ढिलो काम गर्दछ। यदि एउटा एप खोल्न को लागी हामी बारम्बार प्रयोग गर्दछौं, वा केवल ब्राउजर मा, यो पहिले नै हामीलाई समस्याहरु दिन्छ, यो सामान्यतया एक स्पष्ट लक्षण हो। त्यहाँ समय हो जब ढिलो प्रदर्शन ठाउँ को कमी संग सम्बन्धित हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ खाली ठाउँ खाली गर्नुभयो वा तपाइँ धेरै ठाउँ कब्जा गरीएको छैन, तब हामी पहिले नै जान्दछौं कि यो प्रणाली को कुरा हो।
तपाइँको एन्ड्रोइड फोन को ब्याट्री एक निश्चित जीवन छ। यसको अतिरिक्त, फोन आफैं र चार्ज चक्र को उपयोग संग, लुगा यो मा उत्पन्न हुन्छ। केहि जसले उनीहरुको स्वायत्तता मा कमी ल्याउँछ। यदि तपाइँको फोन एक समय को लागी वरपर गरीएको छ, यो केहि हो कि तपाइँ प्राय सम्भवतः नोटिस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि ब्याट्री धेरै थोरै समय सम्म रहन्छ।
यद्यपि तपाइँ रिसोर्ट गर्नुहुन्छ चाल बढाउन को लागी, तपाइँ यो परिवर्तन गर्नुहुन्न। यसको अतिरिक्त, यदि तपाइँ सबै समय मा ब्याट्री सबै भन्दा राम्रो अवस्थामा ब्याट्री राख्न को लागी सल्लाह को पालन गर्नुहोस, यो अपरिहार्य छ कि केहि लुगा उठ्नेछ र यसको क्षमता कम हुनेछ। धेरै फोन मा हामी ब्याट्री परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। यद्यपि फोन र लागत को उमेर मा निर्भर गर्दछ, त्यहाँ मामलाहरु जसमा यो एक नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन किन्न तिर्छन्।
Android को पुरानो संस्करण
हाम्रो एन्ड्रोइड फोन पुरानो छ कि स्पष्ट संकेत को अर्को हो कि हुन सक्छ हामीसंग भएको संस्करण केहि हद सम्म पुरानो भएको छ। हामी वर्तमान मा Oreo र पाई को बीच संक्रमण को बीच मा छौं। Oreo को बारे मा बजार मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग संस्करण हुन को लागी हो, यो एक महिना मा हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, एक तरीका जान्न को लागी यदि तपाइँको संस्करण पुरानो हो यदि तपाइँ अपडेट प्राप्त गर्न बन्द गर्नुभयो। एन्ड्रोइड मा धेरैजसो ब्रान्डहरु सामान्यतया अपडेट को दुई बर्ष दिन्छन्, यद्यपि त्यहाँ फोनहरु छन् कि मात्र अपरेटि system सिस्टम को लागी एक अपडेट प्राप्त हुन्छ। यदि तपाइँ पहिले नै अपडेट गर्न बन्द गरीएको छ, यो एक स्पष्ट संकेत हो कि निर्माता अब तपाइँलाई समर्थन गर्न जाँदैछ।
साथै, एन्ड्रोइड को एक केहि पुरानो संस्करण को उपयोग अर्को समस्या छ। धेरै देखि अनुप्रयोगहरु समर्थन र अनुकूलता बन्द। तेसैले समय संगै, तपाइँ केहि अनुप्रयोगहरु को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनुहुन्न, जस्तै क्रोम को मामला हो, तपाइँको फोन मा। केहि छ कि अन्त मा तपाइँ एक नयाँ स्मार्टफोन को लागी खोज्न को लागी बाध्य हुन्छ।
अर्को तरीका हामी जान्न को लागी प्रयोग गर्न सक्छौं यदि समय एक नयाँ एन्ड्रोइड फोन किन्नको लागी आएको छ, फोन विशिष्टता जाँच गर्न छ। हामी अन्य उपकरणहरु संग फरक छ कि हामी वर्तमान मा बजार मा देख्न सक्छौं। यो हामीलाई यो हेर्न को लागी मद्दत गर्दछ।
उदाहरणका लागि, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यो आज एन्ड्रोइड फोन मा एक सामान्य दृश्य हो (चाहे यो पछाडि वा पर्दा मा निर्मित)। यदि तपाइँको स्मार्टफोन एक छैन, हामी देख्न सक्छौं कि यो केहि हद सम्म यस सन्दर्भमा पछाडि पर्यो। क्यामेरा पनि विचार गर्न को लागी केहि हो। त्यहाँ बजार मा यस क्षेत्र मा एक ठूलो सुधार भएको छ।
यदि हाम्रो क्यामेरा खराब छ, यो एक स्पष्ट संकेत हो कि यो बजार मा के छ भन्ने मा निर्भर छैन। विशेष गरी अब कि हामी मध्य श्रेणी मा धेरै दोहोरो क्यामेरा फोन, एक सामान्य कुरा को रूप मा पाउँछौं। तपाइँको फोन को निर्दिष्टीकरण जाँच गर्नुहोस् र तपाइँ जान्नुहुनेछ कि यो यो नवीकरण लायक छ वा छैन। हामी यसलाई लामो समय सम्म बनाउन को लागी प्रयास गर्न सक्छौं, तर त्यहाँ एक समय आउँछ जब यो अब काम गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » कसरी जान्ने कि एन्ड्रोइड फोनहरू स्विच गर्ने समय हो
स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX अब आधिकारिक हो: उच्च-अन्त्यका लागि नयाँ प्रोसेसर
ग्यालक्सी नोट ले एन्ड्रोइड Pie पाईको बीटा एक यूआईको साथ प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ